Mapeji ekugadzira online ongororo uye maitiro ekuzviita | ECommerce nhau
Mapeji ekugadzira online ongororo uye maitiro ekuzviita
Encarni Arcoya | | Analytics, CRM uye Big Data
Kana iwe uri kushanyira masocial network, iwe uchave waona kuti online ongororo dzave dzemafashoni. Iyi inzira yevashandisi, shamwari nevavanoshanda navo kupa maonero avo pane mimwe misoro inobvunzwa muongororo iyi. Uye zviri kuwedzera kuve zvakajairika kuti vanhu vavashandise mune dzakawanda misoro: zvematongerwo enyika, zororo, kudzidziswa ... Kunyangwe muCommerce yako.
Kana iwe uchida kuziva ndeapi online ongororo, maitirwo azvo uye ndeapi mapeji ari akanakisa pazviri, pano isu tichataura nezvazvo zvese.
1 Ndeapi online ongororo
2 Maitiro ekuzviita
3 Mapeji ekugadzira ongororo dzepamhepo
3.4 Google Drayivu, kune yekutanga online ongororo
Ndeapi online ongororo
Tinogona kutsanangura tsvagurudzo dzepamhepo semutsetse wemibvunzo inobvunzwa kumunhu pasina kuve mumunhu, asi pachinzvimbo chekushandisa mafomu eInternet kuti vakwanise kupa maonero avo pane imwe nhaurwa.
El Chinangwa cheongororo idzi hachisi chimwe kunze kwekuziva izvo boka revanhu, avo vanopindura iwo mubvunzo, zvavanoda uye zvine mashandisiro akawanda. Panyaya yeCommerce, unogona kushandisa ongororo kuitira kuti vashandisi vape maonero avo pamusoro pechinotevera chipo chekupa chinogona kunge chiri, izvo zvavanonyanya kuda kugamuchira (chipo chinoshamisira, kodhi yekudzikisira, nezvimwewo)
Kuburikidza navo, vanhu vazhinji vanosvika nekuti, nekuda kwemafungu eInternet, hapana kukamurwa kwenzvimbo; Chero ani zvake anogona kutora chikamu mazviri, uye izvo zvinobatsira kuve nenhamba huru yevanhu vanokurudzirwa kuvhota. Uye zvakare, ivo vanoonekwa zvinoyevedza (zvinogara zvichitsamira papeji raunogadzira kana nemagadzirirwo auri kuita).
Izvo chete zvinokanganisa zvauchazove nazvo neaya online ongororo ndezvekuti "zvakasarudzika" kubvira, kuburikidza neInternet, unomanikidza vanhu kuti vabatanidzwe, uye avo vasina mukana havagone kutora chikamu (mune nyaya yekuve nechitoro chaicho unogona kugara uchiita maviri wozobatana navo). Uye kana vateereri vako vari vanhu vechikuru, iwe zvakare uchawana zvimwe zvipingaidzo zvekuwana urwu rudzi rweongororo.
Iye zvino zvaunoziva kuti online ongororo chii, ngatienderere mberi kuti tidzidze kuzviita sei? Zvichida kuti, kana iwe uine rairo yekombuta sainzi, izvi zvinoita kunge zvakapusa, sezvo iwe uchifanira kungoenda kune peji, ugadzire uye uvhure, asi zvichave zvinoshanda? Inonyanya kuitika ndeyekuti kwete.
Uye hazvizove nekuti iwe unofanirwa kutanga watsvaga zvishoma. Unofanirwa kuziva kuti sei uchizoita ongororo, kunyangwe kubvunza maonero, kukumbira sarudzo, kugadzirisa zvigadzirwa zvako uye / kana masevhisi ...
Yese ongororo inoda kuve nechinangwa Sezvo kukumbira chimwe chinhu uye kusaita chero chinhu kuchizongotambisa nguva yako, zvinozoitawo kuti vamwe varasike uye ivo voona kuti hauna kufunga kwavo pfungwa, saka kana iwe wozviitazve, ivo havangatore chikamu.
Nhanho inotevera iwe yaunofanirwa kutora ndeyekuti uzive wauri kuda kugadzirisa. Boka revechidiki harizove rakafanana nerekare. Kutanga, nekuti nzira yekugadzirisa yega yega inoshanduka, mumutauro, mukuravira ... Nekutarisa pane aya maviri matanho, iwe uchawana zvirinani mhedzisiro yeinternet ongororo.
Kugadzira ongororo iyi ingave iri inotevera danho, uye isu tinokamura izvi kuita zviviri:
Kune rimwe divi, ziva kuti ndeipi mibvunzo iri kuzobvunzwa, Kana paine paine mhinduro yakavhurika, sarudzo yemhinduro, kana imwe chete kana mhinduro dzakawanda dzichifanira kupindurwa, dzichave dzakawanda sei, kana paine zvirevo ...
Kune rumwe rutivi, gadzira iyo 'kukwidza' yemubvunzo wepamhepo. Ndokunge, gadzira dhizaini inokwezva mushandisi uye, nekudaro, inovakurudzira kutora chikamu. Izvi zvinogona kuve zvisingakwanisike kana iwe ukashandisa mapeji kuita ongororo dzepamhepo, asi nhasi kune akawanda uye iwo ese avandudza zvigadzirwa zvavo.
Mapeji ekugadzira ongororo dzepamhepo
Kutaura nezvekutsvaga kwepamhepo, iwe ungade here kuziva kuti ndeapi mapeji aunogona kugadzira iwo? Chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda mawebhusaiti kwaunga zviite. Saka tinokupa sarudzo yeavo vatinofunga seanonyanya kubatsira kana anoshanda mukushandiswa kwakawanda (kwete chete kweCommerce, asi zvakajairika).
Iyi webhusaiti inobhadharwa, hongu. Asi ine yemahara vhezheni inosvika makumi maviri nemashanu mhinduro dzakatambirwa. Kana bhizinesi rako riri diki, unogona kurifunga nekuti kazhinji havazi vese vateveri vaunotora mumibvunzo, asi chikamu chidiki chete.
Dambudziko nesarudzo yemahara ndeyekuti haugone kuwana rutsigiro, kuwiriranisa neGoogle, kana kuita zvemunhu. Asi padanho rekubhadhara iri rinotyisa.
Pano iwe une imwe chishandiso chemubvunzo wepamhepo. Iyo inokutendera iwe kuti ugadzire yemahara account umo maungaita akasarudzika online ongororo. Ehezve, neganhuriro, uye ndiko kuti inongobvuma zana mhinduro pamwedzi, iwe unogona chete kungoita 100 ongororo (ehe, nemibvunzo isina muganho), uye ine ongororo yemhedzisiro.
Yakafanotemerwa matemplate, saka haufanire kunetseka nezve dhizaini kana iwe usiri kugona pazviri, unogona kugadzirisa imwe yeayo iwe yaunofanirwa kuita kuti ikurumidze.
Izvi zvinobva pamapeji eongororo yepamhepo inozivikanwa zvikuru uye inoshandiswa. Iyo peji rekubhadhara, asi, sevamwe vazhinji, ine yemahara vhezheni ine zvimwe zvinogumira:
Izvo zvinongobvumira gumi mibvunzo. Uye izvi zvinongokupa iwe sarudzo yekuve gumi nemashanu mhando (yakavhurika, yakavharwa, enumeration, yakawanda-mhinduro ...).
Ingosiya mhinduro zana paongororo.
Iwe haugone kurodha zvakabuda pamibvunzo yemibvunzo yepamhepo (yezvaunofanira kubhadhara).
Google Drayivu, kune yekutanga online ongororo
Iwe hauna kuziva izvozvo kuongororwa kwepamhepo kunogona kuitwa neGoogle Drive? Zvakanaka hongu, rimwe rebasa rainaro nderekukupa iwe nemukana wekugadzira mafomu epamhepo paunogona kuisa mibvunzo yaunoda, pamwe nemhinduro.
Kunyanya, zvinoitwa kuburikidza neGoogle mafomu uye, kunyangwe dhizaini iri yakakosha uye paine chero tsika yekugadzirisa, inozadzisa basa rayo zvakanaka, pamusoro pekuve 100% yemahara, ichikubvumidza iwe kushandisa matemplate uye mazhinji marudzi emibvunzo.
Tiri kuenda kune imwe sarudzo yekutsvaga pamhepo iyo, kunyangwe ichibhadharwa, inoratidzira kunyoreswa kwemahara kwezvainokupa: 1000 mhinduro paongororo, 25 mhando dzemhinduro, mibvunzo isina muganho.
Chinhu chakasarudzika chete ndechekuti, kana zvasvika pakugadzira uye kugadzirisa iro remibvunzo, zvinokutadzisa. Iwe unogona chete kusanganisira logo uye nekuchinja iyo yepashure ruvara rweongororo. Asi kana usiri kunyanya kunetseka nezve izvo, inogona kunge iri sarudzo yekufunga.
Pane zvakawanda zvimwe zvingasarudzika kunze kweizvo zvatakurukura pano, asi ruzhinji rwakabhadharwa pamwe nekumwe kusakwana mukunyoresa kwemahara. Kurudziro yedu ndeyekuti iwe uedze ongororo dzinoverengeka dzepamhepo usati waona kuti ndeipi iyo inokodzera zvakanyanya izvo zvauri kutsvaga uye nekudaro kuitisa kune vashandisi vako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Analytics, CRM uye Big Data » Mapeji ekugadzira online ongororo uye maitiro ekuzviita
Maitiro ekudzima iyo Facebook peji